अन्तर-प्यानल जोइन्टहरूमा: छाप र इन्सुलेशन। प्रविधि र छाप प्रक्रिया interpanel जोडों
छाप पूर्वनिर्मित भवन निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू को छ। समय, को bulkhead seams र जोइन्टहरूमा पर्खालहरु को चिसो निम्त्याउँछ जुन मोल्ड, लीक र निर्माण च्याउ, परिणामस्वरूप, बिग्रनु गर्न थाल्छन्।
मुख्य विनाश interpanel बट जोइन्टहरूमा गराउँछ
depressurization जोइन्टहरूमा को निम्न कारणहरू पहिचान गर्न सकिन्छ:
प्राविधिक मान्यता को निर्माण मा गैर-अनुपालन;
कारण संरचना को असमान वर्षा असर तत्व गर्न पर्खाल प्यानल को क्रमिक विस्थापन;
कारण तापमान उतार चढाव गर्न प्यानल deforming;
जस्तै "एसिड वर्षा", हिउँ र वर्षा रूपमा वायुमण्डलीय कारक, को छाप जोइन्टहरूमा मा प्रभाव।
सील र परस्पर-प्यानल जोइन्टहरूमा को इन्सुलेशन लागि विशेष छाप मास्टिक र टास्ने टेप अधीनमा छन्। यी Sealants विभिन्न ब्रान्डहरु, भवन ब्लक र आवेदन को एक किसिम छ।
मुख्य सँगैको सामाग्री जोइन्टहरूमा सील लागि आवश्यक, गर्मी इन्सुलेशन को समारोह, साथै स्ट्याक मास्टिक र आत्म-टास्ने टेप लागि आधार प्रदर्शन गर्नेछन् जो एक सीलेंट, को रूप मा कार्य।
को विस्तार polyurethane (PUR) - सबै भन्दा राम्रो gaskets आधारित रचनाहरूको, मानिन्छ। कारण यी कारणहरूले गर्न हिउँदमा बाहिरी पर्खाल को एक तीव्र चिसो परिणामस्वरूप को interpanel जोडों विनाश र विरूपण, साथै भारी वर्षा समयमा आफ्नो रिसाव छ। फलस्वरूप, यो केवल भवन को भित्री बिगार्छ सक्दैन, तर पनि एकदम त्यहाँ मानिसहरू बीचमा रोगको खतरा बढ्छ।
सील जोइन्टहरूमा को मुख्य प्रकार
प्राथमिक छाप जहाँ सीलेंट उपचार अहिलेसम्म मूल्यांकन गरिएको छैन नयाँ भवन, मा प्रयोग गरिन्छ।
माध्यमिक छाप हाल पहिले नै प्रयोगमा छ जो भवन जोइन्टहरूमा, को मरम्मत गर्न छ।
छाप यस प्रकारको सामान्यतया तुरुन्तै आफ्नो निर्माण पछि प्यानल घरहरू मा प्रदर्शन गरिएको छ।
Bulkhead seams भवन3चरणहरु मा प्रक्रिया:
खाली bulkhead गर्मी ढाल गुहा polyurethane फोम भरिएको।
Interpanel संयुक्त इन्सुलेशन नवीन सेतो रंग को राम्रो-meshed, हल्का पर्याप्त सामाग्री छ जो "vilaterm", प्रशोधन।
यसबाहेक, यस छाप सिउनी राम्रो पानी repellency भएको विशेष पुटीन बाहिर बाहिर छ।
यी तीन चरण को आवेदन जो सबै मौसम अवस्थामा विश्वसनीय गर्मी र waterproofing प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ एक तथाकथित "न्यानो सिउनी", सिर्जना गर्न।
जहाँ पहिले केही समय जोइन्टहरूमा interpanel पहिले नै वर्तमान उपचार प्रक्रिया subjected भवनहरु मा प्रदर्शन। एक माध्यमिक छाप सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक वार्मिंग पछि 6-8 वर्ष मा सबै भन्दा राम्रो छ। Interpanel जोडों, बारम्बार बाहिर छ, जो छाप, पुरानो नयाँ सीलेंट तह कोटिंग द्वारा छाप छन्।
Bulkhead seams। सील: सामान्य नियम
संयुक्त अवस्था आधारमा, माध्यमिक छाप दुई प्रकार विभाजन गरिएको छ।
जब यो सन्तोषजनक अवस्था, पुरानो हीटर पर्याप्त नष्ट छैन भने गरिएको, माध्यमिक प्रक्रिया सीमित हुन सक्छ मात्र मास्टिक नयाँ बाह्य waterproofing पत्र लागू गरेर। भने, तर, स्पष्ट गंभीर क्षति Inter-प्यानल जोइन्टहरूमा को सबै लक्षण, जब उनि पुन छाप केही काम पूरा गर्न आवश्यक छ देखाउँछ। यी समावेश: प्राथमिक छाप को प्रदर्शन दुवै, को सिउनी खोल्ने सबै पुराना fillings बेकम्मा भएका छन्, र सील कार्यहरू पूरा सेट हटाउँदै।
केही नियमहरू द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ प्यानल जोइन्टहरूमा को मरम्मत समयमा:
अगाडि पर्खाल प्यानल को जोडों मा लिक को मामला मा, परस्पर-प्यानल जोइन्टहरूमा को छाप निर्माण को सबै यांत्रिक मोहरा, साथै प्यानल र अनुदैर्ध्य पर्खाल को अन्त को बीच जोइन्टहरूमा लगे छ।
त्यहाँ मोहरा को ठाडो अनुदैर्ध्य सिउनी एक प्रवाह हो भने, बाहिर घर को सम्पूर्ण उचाई भन्दा सबै ठाडो seams को छाप लगे। साथै, सबै तेर्सो जोइन्टहरूमा यसलाई आसन्न सील उजागर।
एक दोष तेर्सो जंक्शन मा हुन्छ भने, सबै जोइन्टहरूमा प्यानल तीन वा चार ठाडो पङ्क्तिहरू मा मिलाइनेछ सील।
प्यानल जोइन्टहरूमा खातामा जोडहरुमा Sealants तनाव र सङ्कुचन गर्न subjected छन् भनेर बिन्दु लिनुपर्छ मर्मत गर्दा। यो तापमान परिवर्तन, दबाव र ठोस को "छिर्न", साथै सम्पूर्ण निर्माण को तलछट उत्पादन गर्ने तनाव प्रभावित छ। यसबाहेक, तह मोटाइ अनुपात वृद्धि भएको भली भांति बंद bulkhead संयुक्त चौडाई मतलब यस्तो भार बलियो हुन्छन्। यस कारण लागि, सीलेंट पत्र सिउनी को चौडाई भन्दा दुई पटक सानो हुनुपर्छ।
Inter-प्यानल जोइन्टहरूमा को सील। प्रविधि
Bulkhead जोइन्टहरूमा, अधिकतम गुणस्तर हुनुपर्छ छाप जो, धेरै चरणमा प्रक्रिया। सबैभन्दा टिकाउ छाप प्राप्त गर्न को लागि जोइन्टहरूमा एक शव परीक्षा हुनुपर्छ।
हामी खोल्ने देखि एक phased मरम्मत प्यानल जोइन्टहरूमा विचार गर्न प्रस्तावित।
निम्न सील बट जोइन्टहरूमा घरहरू पूर्वनिर्मित "वार्म सिउनी।" भनिन्छ यसको मुख्य फरक भएको फोम पत्र परिरक्षण आधार सिउनी विशेष गर्मी को आवेदन छ।
जोइन्टहरूमा को मरम्मत परीक्षण को एक ठूलो संख्या पार गरेको छ र लामो संसारभरि धेरै देशहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ छ।
Phased पकड caulking घर
को bulkhead seams कसरी ढाक्नु गर्न विचार गर्नुहोस्।
1 काम पहिलो चरणको मा, जोइन्टहरूमा को मरम्मत पूरा अघि, यो आवश्यक केही तयारी गर्न छ। तिनीहरूले एक राम्ररी परीक्षा Inter-प्यानल जोडों र सतह तयारी समावेश। यो समावेश:
रंग, धूलो, माटो र delaminated प्यानल देखि सतहहरु को सफाई;
को seams र पुरानो, थकित-बाहिर इन्सुलेशन र सील हालतमा को जोइन्टहरूमा देखि हटाउने;
2. ध्यानपूर्वक interpanel जोडों polyurethane (घटक फोम) इन्सुलेट भर्नुहोस्। यो सामाग्री solidification समयमा विस्तार गर्न र जसबाट भएको सिउनी भित्र अवस्थित शून्य भर्न tends कि उल्लेख गर्नुपर्छ। भवन मा शुद्धीकरण र सील जोइन्टहरूमा या त वा स्वयं यंत्रीकृत तरिका गर्न सकिन्छ। सुरू काम अघि Inter-प्यानल जोइन्टहरूमा को सतह जाँच गर्नुहोस्। यो सुक्खा हुनुपर्छ।
खोक्रो ट्यूब को रूप मा उत्पादन जो इन्सुलेशन "vilaterm" स्थापना गरेर 3. इन्सुलेशन interpanel जोडों। यसलाई व्यापक पूर्वनिर्मित भवनहरु मा जोइन्टहरूमा को मरम्मत मा प्रयोग गरिन्छ। यसको गुण मा सामाग्री राम्रो लोच, बाक्लो संरचना छ, यो काम गर्न पर्याप्त सुविधाजनक छ। को फोम पत्र, अझै स्थिर छैन जो मा थाक "vilaterm"। व्यास मा 25-30% संयुक्त को चौडाई भन्दा बढी हुनुपर्छ।
त्यहाँ इन्सुलेशन को शीर्ष मा सीलेंट को लागि आवेदन ठाउँ छ भनेर बुकमार्क इन्सुलेशन सम्पूर्ण लम्बाइ साथ अंतराल बिना गरे।
4 अन्तिम चरण - एक सील मास्टिक (पानी-विकर्षक सीलेंट) पूर्व-खचाखच भरिएको इन्सुलेशन बंद जो हालतमा jointing।
Inter-प्यानल यस कार्यान्वयन मा संयुक्त छाप पूरा!
प्यानल बीच जोइन्टहरूमा सील + 30 ° सी देखि -10 ° सी को एक तापमान दायरामा घरमा बाहिर छ यो वर्षा अनुपस्थित हुनुपर्छ मा, जोइन्टहरूमा को अन्यथा छाप छोटो-बस्ने हुन सक्छ।
Bulkhead जोइन्टहरूमा, छाप को 2nd तल्ला माथि उचाइ मा बाहिर छ, जो, योग्य औद्योगिक आरोहीहरूको संग छाप।
प्रति 1 मिटर सिउनी सिलिकन सीलेंट खपत। गणना को विधि उदाहरण र
पत्थर पोशिश। विशेषताहरु र गुण
"Basvul" (इन्सुलेशन): वर्णन, विनिर्देशों र स्ट्याकिङ को सुविधाहरू
आधुनिक दराज मा ऊनी कपडा
Scot स्कर्ट - एक वास्तविक masculinity मा प्रयास
एक pinched sciatic स्नायु। लक्षण र रोग को उपचार
दबाइ "HEPA-Merz": समीक्षा र विवरण
Raspberries, उत्तर काकेशस लागि विभिन्न
संसार धर्म रूपमा बौद्ध
कसरी प्रस्तुति संगीत राख्न: शुरुआती लागि सुझावहरू
होटल Woraburi रिट्ज4* (पटाया, थाईल्याण्ड): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा